China Readymade Vertical Bofu Kunze Kunze uye Kambani | ETEX
Vertical Mapofu ndiwo akanyanya tsika yekuvhara hwindo zvigadzirwa. Yayo ine basa rekutsvaira kupenya uye kugadzirisa. Kubva pane akasiyana ekugadzira machira machira, Vertical Mapofu ndiwo akasarudzika sarudzo uye nyore kutarisana nechido chako.
Chishongedzo: 100% Polyester
Upamhi: 89/100 / 127mm Vane
Sisitimu: Chain / Wand System
Mucheka Wemicheka: Plain, Jacquard, Blackout, FR ..
Aluminium: Nyembesi, Chikwere, Yakakwira, Yepasi Track
Mapofu edu akatwasuka achipedza kamuri. Ivo vanobatsira kuchengetedza chakavanzika, kudzora tembiricha, uye kumisa mwenje wakajeka kuti usapinda mukamuri. Naizvozvo, mapofu edu akasviba ari pameso akakodzera pamubhedha apo zuva rezhizha rinogona kumutsa iwe mangwanani, kana kumisa vadiki kurara usiku.
Vertical blinds inzira huru yekuchengetedza nzvimbo uye kugadzira yakachena, yemazuva ano mitsara mune chero kamuri. Meso edu akasvinuka mapofu anouya nemhando dzakasiyana dzemasikirwo kuti asanganise seamless neyako yemukati décor apo ichiwedzera yakashongedzwa kupedzisa pawindo rako. Grey vertical blinds parizvino yakakurumbira, sezvakaita chena mapofu emaziso. Aya mavara asina kwazvakarerekera anoshanda zvakanaka munenge chero mamiriro ezvinhu uye chero maitiro ekushongedza.
Yakanakira huwandu hwewindo rakasiyana-siyana, kubva pamawindo akajairwa kusvika pamusuwo we patio nemahwindo eFrance, mapofu edu akasarudzika akatwasuka anouya mumhando dzakasiyana siyana dzakapetana uye dzakadonha. Kunyangwe iri yeyokuchengetera kwako, kana kuti uri kutsvaga nemaziso mapofu e bay hwindo, rako rine chokwadi chekuwana zvaunoda paDunelm. Isu tinoturawo sarudzo yakasarudzika yemapofu mumhando yezvinhu. Micheka yedu yekumusoro mapofu ndiyo ingava yedu anonyanya kufarirwa, asi mapurasitiki, esimbi uye emapuranga akatarisa mapofu ari zvakare kuwanikwa.
● Zviri Nyore Kuchengeta:
Yakagadzirwa kubva polyester uye inowanikwa mune dzakasiyana siyana - kusanganisira chena, kirimu uye grey maziso edu akatarisa mapofu ari nyore kuchengetedza. Ingoisa chipanje chakachena kana kupukuta chena nejira nyoro kuti udzorere meso ako pameso epamhepo. Izvi zvinovaita vakanakira kunge mapofu ekicheni, umo mapasuru uye zvipuka zvinogona kutsvairwa zvakachena. Metal mapuranga akamiswa mapofu ari zvakare akanyanya kupfeka uye kuderera kuchengetedza.
● Kuchengetedza kwekutanga:
Kune dzimba dzemhuri zvakakosha kunzwisisa kuchengetedza kwemapofu, kunyanya munzvimbo dzinoshandiswa nevana vadiki. Yedu yekupfeka mawindo nyanzvi dzinogona kuraira pane rakakodzera zvakanyanya bofu kwauri, pamwe nekutsanangura kukosha kwezvinhu zvekuchengetedza tambo.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvekuisa zvakachengetedzeka mapofu ari mumba mako, verenga Bofu Redu Rinotitungamira Kuti uwane rumwe ruzivo nezvewindo kupfeka, ndapota ona nyanzvi dzemazano edu matipi. Tarisa yedu yakazara yakazara yemaziso mapofu uye uwane yakakodzera imba yako.
● Vertical blinds Kushandiswa:
Vertical Mapofu Anoshandisa kwazvo muCaf, Chikoro, Imba, Nzvimbo yekutengeserana, zvitoro, furati, chipatara uye nedzimwe nzvimbo dzose dzinobikwa. Roller blinds ose anoshandisa zvemukati kana kunze. Kubva pane kusingaperi kusarudzwa kwemapofu zvinhu uye masisitimu.
Yepfuura: Venetian Mapofu
Inotevera: Readymade Zebra Bofu